31 | August | 2017 | Danya Wadi
ရခိုင်​အ​ရေး လုံခြုံ​ရေး ​ကောင်​စီ မှာ​ဆွေး​နွေး
By danyawadi August 31, 2017 Leaveacomment
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခ အရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ သြဂုတ်လ ၃၀ရက်မှာ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ လက်တလော ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပေါ် အကြီး အကျယ် စိုးရိမ်နေကြပြီး ဒီ အကြမ်းဖက်မှု တွေကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချ ခဲ့ကြတယ် လို့ ဒီကိစ္စကို လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့သူ ကုလ သမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ ယူကေ သံအမတ် Mathew Rycroft က သတင်းထောက်တွေ ကို ပြောပါတယ်။ ဒီအရေးမှာ ပါဝင် ပတ်သက်သူတွေ အနေနဲ့ ပဋိပက္ခ လျော့ကျသွားအောင် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကိုလည်း တိုက်တွန်း လိုက်တယ်လို့ […]
ရခိုင်​ပဋိပက္ခ သတဂမးရယူခွင့်​နဲ့ သတင်းသမားများ လုံခြုံ​ရေး
မခင်ဖြူထွေး လတ်တလော အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတဲ့ ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်းက အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ရယူနိုင်အောင် အစိုးရက သတင်းသမား တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အမြန်ဆုံး စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးသင့် တယ် လို့ သတင်းမီဒီယာ သမားတွေနဲ့ အရက်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ပြ ပြောဆိုနေကြပါ တယ်။ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်း မသိရတဲ့သူတွေ တင်ထားတဲ့သတင်းတွေ ကြောင့် လူထုတွေအကြား စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ မြင့်တက်လာ စေသလို၊ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ သတင်းသမားတချို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာ၊ ရန်ပြု တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်စုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေး ပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တော […]
Erdogan urges UN to put pressure on Myanmar government
Turkey’s president discusses violence in Myanmar in phone call with UN Secretary-General Antonio Guterres President Recep Tayyip Erdogan on Wednesday urged UN Secretary-General Antonio Guterres to put pressure on Myanmar’s government over violence in Rakhine state which has reportedly displaced or killed thousands of Rohingya Muslims. Turkish presidential sources said Erdogan heldaphone call […]
The UN Security discussed the violence in Myanmar
UNITED NATIONS: The UN Security Council on Wednesday (Aug 30) discussed the violence in Myanmar where clashes andasecurity crackdown by the military in Rakhine state have sent 18,500 Rohingya fleeing across the border into Bangladesh. There was no formal statement from the 15-member council following the closed-door meeting but British Ambassador Matthew Rycroft […]